octobre 2015 – filazantsaramada
FIVAVAHANA ISANANDRO HO FIAROVANA!
« Na dia ny liona tanora aza tsy ampy hanina ka noana; fa izay mitady an’i Jehovah kosa dia tsy orin-java-tsoa akory. » Salamo 34:10 ***Maro ny zavatra azon’ny olona tadiavina eto amin’izao tontolo izao ity, ary tsy miafina fa vao mifoha maraina ny olona dia mitady ny mahasoa azy mandra-pilentiky ny masoandro. Misy aza ny miaritory […]
Publié parfilazantsaramada octobre 30, 2015 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur FIVAVAHANA ISANANDRO HO FIAROVANA!
Mitarika ireo voafonja hibanjina mandrakariva an’i Jesosy Kristy Raha tsiahivina dia tsy mijanona eo amin’ny fitaizana ny ara-panahin’ireo voafonja lehilahy sy vahivavy eny Antanimora ihany ny asa ataon’ny Feon’ny Filazantsara (FF) eny an-toerana. Ankoatra ny Fampianarana Soratra Masina Ifandraisana (FSMI) izay omena azy ireo, ny famangiana isan-kerinandro ataon’ireo mpiara-miasa an-tsitrapon’ny FF mitondra ny Tenin’Andriamanitra sy […]
Publié parfilazantsaramada octobre 30, 2015 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur Fonjaben’ Antanimora
TSY NAMAN’IZAY MIHEMOTRA!
« aza mahafoy ny fiarahantsika miangona, tahaka ny fanaon’ny sasany, fa mifananara kosa, mainka satria hitanareo fa mihantomotra ny andro. » Hebreo 10:25 Tany am-boalohany dia nataon’Andriamanitra Ray mpamorona antsika ho mpiara-miasa aminy isika olombelona, ka notendreny hitandrina ny saha i Adama. Ny zavatra voahariny rehetra dia hitany fa tsara, ary ny olombelona no nametrahany ny fitokisany […]
Publié parfilazantsaramada octobre 23, 2015 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur TSY NAMAN’IZAY MIHEMOTRA!
“Andresena ny tahotra ny Finoana” Miha sarotra sy miha ratsy isan’andro ny fiainana, eo anatrehan’izany dia tsapa fa miha reraka ara-panahy, ka miaina ao anaty tahotra sy tebiteby lalandava ny maro na dia efa kristiana aza. Manoloana izany indrindra, Rtoa Raharimanana Lalao, Mpitandrina FJKM Malaho Vaovao sy Atoa Rakotonoely Joseph Emile izay mpiara-miasa an-tsitrapo amin’ny […]
Publié parfilazantsaramada octobre 22, 2015 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur FJKM Malaho Vaovao (SPAA 11)
« Ary Jesosy, nony nahita ny finoan’ireo, dia nanao tamin’ilay mararin’ny paralysisa hoe: Matokia, anaka, voavela ny helokao. » Matio 9:2b ***Ny Soratra Masina dia manambara fa isika tsy mba naman’izay mihemotra ho amin’ny fahaverezana, fa naman’izay mino ho amin’ny famonjena; fa raha mihemotra isika dia tsy sitraky ny Fanahiny. Ny finoantsika an’i Jehovah dia mahafaly Azy […]
Publié parfilazantsaramada octobre 16, 2015 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur JEHOVAH ANDRIAMANITRA MAMELA HELOKA NY OLONY.
Fandefasana FILM ara-pilazantsara Ny Zoma 02 sy Sabotsy 03 Oktobra takariva, taorian’ny Seminera “Fampitaovana ny Olona Masina”, niarahan’ny Fiangonana 4 sy ny Feon’ny Filazantsara izay natao ny 01 sy 02 Oktobra lasa teo, tao amin’ny FJKM Kristy Fiainana Antanetilava dia nisy avy hatrany ny Tafika Masina tamin’ny alalan’ny Fandefasana horonan-tsarimihetsika notontosain’ny Feon’ny Filazantsara, niantsoan’ny Fiangonana […]
Publié parfilazantsaramada octobre 14, 2015 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur FJKM Kristy Fiainana Antanetilava
« Dia tafasaraka amin’i Kristy hianareo na iza na iza izay mitady hohamarinina amin’ny lalàna; efa lavo niala tamin’ny fahasoavana hianareo! » Galatiana 5:4 ***I Paoly Apostoly dia manambara ao amin’ny epistily ho an’ny Romana fa ny marina amin’ny finoana no ho velona. Tany amin’ny Testamenta Taloha dia nisy ohatra ny amin’i Abrahama izay nohamarinina tamin’ny finoany […]
Publié parfilazantsaramada octobre 9, 2015 octobre 8, 2015 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur FA FAHASOAVANA NO NAMONJENA ANAREO!
Seminera Fampiofanana faharoa ho an’ny Taom-piasana 2015/2016 Tanteraka soamantsara ny 01-02 oktobra 2015 teo ny Seminera Fampiofanana “Fampitaovana ny olona masina” teny amin’ny Fitandremana Kristy Fiainana Antanetilava (SPAA 12). Fitandremana efatra amin’ny sahan’ny FJKM moa no nandray anjara tamin’izany. Nanotrona sy nandray anjara mavitrika tamin’ny Fampiofanana rahateo ireo raiamandreny efatra dia: Rtoa Ranivoarisoa Annie Olga […]
Publié parfilazantsaramada octobre 8, 2015 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur Fiaraha-miombon’antoka Fiangonana/ Feon’ny Filazantsara
« Fantaro ankehitriny fa Izaho no Izy, ka tsy misy andriamanitra eto amiko. Izaho no mahafaty sy mahavelona, ary Izaho no maharatra sy mahasitrana, ka tsy misy mahafaka amin’ny tànako. » Deot 32:39 ***Jehovah Andriamanitra no namorona izao tontolo izao, ary Izy koa no namorona ny olombelona. Ny zavatra rehetra dia hain’Andriamanitra. Teny indraim-bava ihany dia nahazoany […]
Publié parfilazantsaramada octobre 2, 2015 septembre 29, 2015 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur NY FAHAFATESANY NO NAMONJENY ANAY TAMIN’NY FAHAVEREZANA MANDRAKIZAY!